Shikhar Samachar | कांग्रेस पुनर्जागरणको मार्ग कांग्रेस पुनर्जागरणको मार्ग
बहस विचार होइन, व्यक्तिकेन्द्रित छ, नवीन विचार र दृष्टिकोणविनै नेतृत्वका लागि भइरहेका कलाविहीन छिनाझप्टीले जग हँसाइरहेको छ
नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनको संघारमा खडा छ । लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् पार्टीका लागि महाधिवेशन ठूलो पर्वजस्तै हो । महाधिवेशनमा हुने सघन बहस र निष्कर्षले पार्टीलाई सयौँ वर्षसम्म निर्देशित गर्न सक्छ । आज हामीले महाधिवेशनमा उठाउने एजेन्डा, गर्ने बहस र निकाल्ने निष्कर्षमाथि दशकौँपछि समेत मूल्यांकन भइरहन सक्छ । त्यसैले हामीले महाधिवेशन कसरी गर्छाैं, यो पहिलो र महत्वपूर्ण सवाल हो ।
लोकतन्त्रको समृद्ध परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसको महाधिवेशनलाई लिएर छापामा जसरी विषयहरू उठिरहेका छन्, यसले कांग्रेस आफ्नो पार्टीजीवनको सबैभन्दा निराश र प्राणविहीन अवस्थामा बाँचिरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । किनकि, बहस विचारमा होइन, व्यक्तिमा केन्द्रित छ, कुनै नवीन विचार र दृष्टिकोणविना नै नेतृत्वका लागि भइरहेका कलाविहीन छिनाझप्टीले जग हँसाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेता प्रदीप गिरिको भनाइ अझ सान्दर्भिक छ । ‘कांग्रेसले यस समय विचारधाराका ठाउँमा केही संस्कार, केही नारा, केही अपवाक्य, केही सित्तैँ र उधारो आएका दान, उपदान र महावाणीबाट काम चलाइरहेको छ ।’ यस स्थितिको तत्काल अन्त्य हुन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसले नवजीवन पाउनका निमित्त भावनाको धरातलबाट उठेर सिद्धान्तको उचाइमा चढ्नुपर्छ, अर्थात् गतिशील हुनुपर्छ ।
कांग्रेसको विषय आउँदा बिपीको नाम कतै छुट्दैन, तर बिपीको व्यक्तित्व र विचारपद्धतिबारे यस वेला हामीलाई कुनै सरोकार छैन । बिपी गतिशील हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँको चिन्तनमा पनि व्यापक फैलावट र गतिशीलता देखिन्छ । आफ्ना विचारलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्न र दार्शनिक रङ दिन उहाँ काबिल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भिन्न–भिन्न परिस्थितिमा गान्धी, नेहरू र जयप्रकाश नारायणका विचारतर्फ पालैपालो छलाङ लगाउनुभयो । मार्क्सवादका कतिपय सार्वभौम मूल्यहरूको प्रशंसा गर्नसमेत उहाँ चुक्नुभएन । आफ्ना विचारलाई छाड्न सक्ने, नयाँ विचारलाई बहस र छलफलपछि आत्मसात् गर्न सक्ने विशिष्ट खुबी थियो, उहाँमा । त्यही कारण बिपीका पालामा कांग्रेसले पटक–पटक नयाँ जीवन पाउँथ्यो । नयाँ जीवनतर्फको त्यो गति कांग्रेसमा अहिले अवरुद्ध छ, पार्टी चिन्तन एवं विचारहीनताको गहिरो दलदलमा भासिएको छ । यसर्थ, आउने महाधिवेशनमा सबैभन्दा प्रखर रूपमा छलफल हुनुपर्ने विषय नै यही हो ।
पुरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् →
लकडाउनले बालबालिकाको पढाईमा पारेको असर
छोरिको पीडा कहिले सम्म ?
आशिका भट्टराई /कालिकोटछोरी जन्मिइन भनेर न मेरी आमा सन्तुष्ट थिइन न त यो समाज नै ! हुन त सुख न...
कोरोनाले राखे पहिलेझै फेरि भेटौला साथी
यतिखेर विश्वव्यापी महामारिको रुपमा फैलिएको (covid-19) नयाँ भेरियन्टले विश्वभरी नै आतंक मच्चाएको छ। पहिलो चरणको भन्दा पनि झन खतरनाकको रुपमा...